Gudoomiyaha Xaquuqul-aadanaha Puntland oo la Amaanay – Radio Daljir
Diseembar 15, 2015 4:26 b 0
Somalia, December 15, 2015-(Daljir)_Kulan lagu qabtay xarunta gollaha Baarlamaanka Puntland ee Garowe ayaa waxaa shihaado sharafeed lagu gudoon siiyay Gudoomiyaha guddiga xaquuqul aadanaha Baarlamaanka Xildhinaan Farax Ceydiid Casoowe.
Waxaa kasoo qayb galay Xildhibaano, Gudoomiyaha xafiiska xaquuqul aadanaha Puntland iyo masuuliyiin kale, Maxamed Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha xaquuqul Aadanaha ayaa Shihaadadan gudoon siiyay Xildhibaan Farax Ceydiid Casoowe oo uu sheegay inay muteysatay.
Maxamed Yuusuf Cali ayaa sheegay Marwo Xildhbaan Farax Ceydiid Casoowe inay shihaadadan ku heshay Ilaalinta , Taaba Gelinta Xuquuqda Aadanaha dhiiri gelinta Waxbarashada gabadha ka hortaga shaqaaqooyinka Dumarka loo geysto, waxa kale uu tilmaamay guddigan inuu howl weyn qabtay ayna wada shaqeyn wanaagsani kala dhaxayso.
Xildhibaan Farax Ceydiid Casoowe ayaa dhankeeda ka mahad celisey waxayna ay xustey wada shaqaynta ka dhexeysa xafiiiska Xuquuul insaanak Puntland iyo Guddiga xuquuql insaanak ee golaha Wakiiladda Puntland.
Gudoomiyaha Xaquuqul aadanaha Puntland oo dhowaan Baarlamaanka ka hor jeediyay khudbadii sanad laha ee xafiiskiisa ayaa waxaa khudbadaasi soo dhaweeyay xildhibaanadii goobta fadhiyay, taasoo cadaysay xaalada xaquuqul aadanaha iyo heerka uu marayo.